Wararka - Sida GSD iyo noocyada diyaaradaha aan duuliyaha wadin ay u saameeyaan saxnaanta qaraabada nooca 3D
D2Pros —— Kaamirooyinka kumbiyuutarka ee kumbiyuutarka loo yaqaan 'multi-rotor drone oblique camera'
Wararka Shirkadaha Teknolojiyada Rainpoo
Sidee GSD iyo noocyada diyaaradaha aan duuliyaha wadin u saameeyaan saxsanaanta qaraabada qaabka 3D
Maqaalka ugu dambeeya Sidee dhibcaha xakamaynta dhulka iyo xogta PPK u saameeyaan saxsanaanta qaabka 3D, waxaan ku soo sheegnay marka lagu daro GCPs iyo PPK datas, GSD iyo drone side sidoo kale waxay leeyihiin heer gaar ah oo saameyn ku yeelashada saxda ah ee 3D Marka waxaan sameyneynaa baaritaan kale si aan u xaqiijino.
Tijaabada 1: Saamaynta GSD ku leedahay saxnaanta qaraabada qaabka 3D;
Diyaarad xamuul ah
Kaamirada loo yaqaan 'Oblique camera'
Jadwalka Natiijada 1:
dhererka cabbirka （L0）
3D dhererka tusaalaha （L1） GSD = 2cm
3D dhererka qaabka （L2） GSD = 1.5cm
Jadwalka Natiijada 2:
Jadwalka Natiijada 3:
Jadwalka Natiijada 4:
Doorsoomayaasha isbeddelka tijaabada 1 waa:
1: Iyadoo / Aan lahayn xogta PPK.
2: Iyadoo / La'aan yahay GCPs.
3: GSD kala duwan ： 1.5 cm ama 2cm
Falanqaynta ka dib afarta nooc ee xogta tijaabada ah, waxaan soo qaadan karnaa gabagabada soo socota:
Marka kamaraddaba ay DG4Pros tahay:
(1) Iyadoo / Aan lahayn barta xakamaynta dhulka (GCP) iyo xogta PPK ee ku lug leh ATan-geynta AT, hadey tahay VTOL ama dhowr rotor drone, hadey GSD tahay 2cm ama 1.5cm, qaabka 3D oo ay dhistay kamarad dG4Pros ah buuxin kara shuruudaha qaladka saxnaanta qaraabada Ds≤10cm (Dhab ahaan ≤5cm).
(2) Marka GSD uu yahay hal doorsoome, saxsanaanta qaabka 3D ee GSD = 1.5cm ayaa ka wanaagsan tan GSD = 2cm.
Tijaabada 2: Saamaynta noocyada nooca aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan 'drone side' ee saxnaanta qaraabada qaabka 3D
3D dhererka qaabka （L1） CW10
3D dhererka qaabka, L2, M600Pro
Isbeddelada tijaabada 2 waa:
1: Iyadoo / La'aan yahay GCPs.
2: Diyaarado aan duuliyaha lahayn oo kala duwan: diyaarad aan duuliyaha lahayn oo loo yaqaan 'VTOL drone' ama dayax-gacmeed dhowr-rotor ah
Falanqaynta ka dib labada nooc ee xogta tijaabada ah, waxaan soo qaadan karnaa gabagabada soo socota:
(1) Iyadoo / Aan lahayn barta kontoroolka dhulka (GCP) hadey tahay VTOL ama dhowr-rotor drone, qaabka 3D ee ay dhistay kamarad dli ah DG4Pros wuxuu buuxin karaa shuruudaha qaladka saxsanaanta Ds≤10cm (Dhab ahaan ≤5cm).
(2) Marka noocyada diyaaradaha aan duuliyaha wadin ay yihiin hal doorsoome, saxsanaanta qaabka 3D ee leh rotor-ka badan ayaa ka wanaagsan tan VTOL, laakiin farqiga uma weyna.
Hore:Sidee dhererka focal u saameynayaa natiijooyinka qaabeynta 3D